ငါက YouTubotato ပဲ Martech Zone
စနေနေ့၊ ဇွန် ၁၃၊ ၂၀၁၅ တနင်္ဂနွေ, စက်တင်ဘာလ 30, 2012 Douglas Karr
ဒီနေ့ငါစစ်ဆေးခဲ့တယ် AppleTV နောက်ဆုံးသတင်းများအဘို့နှင့်တ ဦး တည်းရှိ၏။ ငါ၏အ chagrin ဖို့အများကြီး, အ update ကိုထားတော်မူ၏ Youtube ကို အပေါ် access ကို AppleTV။ အရည်အသွေးကအလွန်ကောင်းတယ်၊ မီနူးစနစ်ဟာတောက်ပတယ်၊ ဗွီဒီယိုတွေကိုသွားကြည့်ပြီးကြည့်ရှုဖို့အရမ်းလွယ်တယ်။ ဝေး Youtube ကိုက်ဘ်ဆိုက်သူ့ဟာသူထံမှတိုးတက်လာသည်။ သငျသညျ AppleTV ကိုမရရှိပါက, ဒီကကျိုးနပ်စေသည်!
ဒီတနင်္ဂနွေမှာ AppleTV YouTubotato ပါ။ ဒီနေ့အနှစ်သက်ဆုံးဗီဒီယို?
ဇွန် 23, 2007 မှာ 6: 39 pm တွင်
ပထမတော့သူကသူမဖက်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ဗီဒီယိုရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကတော့အိမ်နီးချင်းကိုမချစ်တော့ဘူးဆိုတာပဲ သတင်းစကားကဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရလို့ကျွန်တော် ၀ မ်းသာပါတယ်။ အခမဲ့ပွေ့ဖက်ခြင်းကိုအဘယ်ကြောင့်တားမြစ်ရကြောင်းကျွန်ုပ်နားမလည်ပါ။